बोर्ड सदस्य नियुक्ति – कसको जित, कसको हार ! - Khelpati
शनिवार, आश्विन २४, २०७७ हिम बिक्रम केसी
काठमाडौं । राखेपमा दोस्रो पटक सदस्य सचिवको रुपमा छिर्दै गर्दा रमेश सिलवालले सुरुमै दुई ठक्कर खान पुगे ।
पहिलो, १३ औं सागको ब्याडमिन्टन खेलको सामान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको विषय सार्वजनिक हुन पुग्यो ।
अर्को, निकै जोडबलका साथ परिषद्ले अघि बढाएको मुलपानी क्रिकेट मैदानको प्यारापिटको निर्माणको टेण्डर प्रक्रिया विवादमा पर्यो ।
दुबै अनियमितताको विषयलाई बोर्ड सदस्यको रुपमा राखेप आएका सुवास श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमा उठाएका थिए ।
नयाँ ऐन अनुसार शक्तिशाली बनेको मन्त्रालयले सागको सामान खरिदको विषयमा छानविन गर्न राखेपलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्यो ।
अर्को, मुलपानीको टेन्डर प्रक्रियामा मिलेमतो देखिएको निष्कर्ष सहित खेलकुद मन्त्रालयले सम्झौता प्रक्रिया तत्काल रोक्ने निर्णय गर्यो ।
उल्लेखित दुई घटनाले सदस्य सचिव सिलवालकाे दोस्रो कार्यकालको हनिमुन समय तनावपूर्ण रुपमा बिताईदियो ।
दुवै घटनाको अग्रणी मोर्चामा देखिएका थिए, बोर्ड सदस्य श्रेष्ठ । खेलकुद मन्त्री सहित नेकपा नेताको संरक्षणमा श्रेष्ठ चलिरहेको सिलवालको बुझाई थियो ।
सिलवाल राखेप चलाउन नसकिने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर खेलकुद मन्त्री सहितका बोर्ड सदस्यले आफुलाई एक्लो पारेर पेलेको गुनासो गरेका थिए । यस अवस्थामा खेलकुद चलाउन नसकिने सिलवालको निष्कर्ष थियो ।
पहिलो चरणको बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा खेलकुद मन्त्रीले एकलौटी रुपमा ६ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका थिए । अब मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्त गर्ने ९ जनामा आफु अनुकुलका व्यक्ति राख्नुपर्ने सिलवालको अडान थियो । उनले पुरेन्द्र बिक्रम लाखे सहितको सूचि बालुवाटारमा बुझाएका थिए ।
पुरेन्द्रलाई बोर्ड सदस्यमा तानेर आफुमाथि दबाब बढाईरहेका सुबास श्रेष्ठलाई ‘काउन्टर’ दिन सकिने सिलवालको रणनीति थियो ।
खेलकुदमा ‘मनि अनि मसल्स’को प्रभाव बुझेका सिलवालका लागि लाखे जत्तिको उपयुक्त पात्र अरु हुने कुरै भएन । परिषद् चलाउने कार्यकारी समितिमा पनि आफु अनुकुलका सदस्य तयार गर्नुपर्ने दबाब सिलवालमाथि थियो ।
अब अर्को पाटो ।
रमेश सिलवाल, नेकपाको खेलकुद राजनीतिका अप्रिय पात्र हुन् ।
पाटी राजनीतिमा खासै नदेखिने सिलवाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग निकट छन् । दोस्रो पटक सदस्य सचिवमा सिलवाललाई ल्याउन नहुने अधिकांश नेकपाका नेताको जोड थियो । तर सिलवाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले सदस्य सचिव बनाएरै छाडे ।
मुख्य शक्ति बाहेक कसैलाई नटेर्ने, रुखो बोल्ने र दम्भपूर्ण व्यहोराका कारण उनलाई नेकपाका खेलकुदका नेताहरु कसैले मन पराउँदैनन् ।
सदस्य सचिव नपाउने अवस्थामा नेकपाका नेताहरुले खेलकुद महासंघका सह–संयोजक शिव कोईरालालाई उपाध्यक्षमा सिफारिस गरेका थिए । त्यसैले एकै पटक राखेप उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
सदस्य सचिव नभएपनि राखेपमा आफु अनुकुलको नेता व्यवस्थापन गर्ने खेलकुद महासंघका नेताहरुको रणनीति थियो । सोही अनुसार नेताहरुले औपचारिक बैठक राखेर मन्त्रीपरिषदबाट नियुक्त गरिने पात्रहरुको प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
तर पछिल्लो सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले ‘क्लस्टर’ मिलाउने अख्तियारी सहित बोर्ड सदस्यको सूचि खेलकुदमन्त्रीलाई थमाए ।
महासंघको सिफारिसलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्रीले सदस्य सचिव सिलवालले सिफारिस गरेका अधिकांश नामहरु मन्त्रीपरिषदबाट पास गराए ।
सिलवालले प्रस्ताव गरेका मुख्य नाम तीनै थिए, जो मदनभण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीमा बसेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गरेका थिए । मन्त्रीपरिषदबाट मनोनित अधिकांश पात्रहरु सिलवाल अनुकुलका छन् ।
पोस्टर ब्वाई हरी
मनोनित ११ जनामा हरी खड्का सर्वाधिक चर्चित पात्र हुन् । उनी नयाँ बन्ने बोर्डका ‘पोस्टर ब्वाई’ भन्दा हुन्छ ।
हरी खड्काको नेपाली फुटबल इतिहासमा बेग्लै छाप र इतिहास छ । समकालिन फुटबलमा उत्तिकै सक्रिय हरी पछिल्लो समय एन्फामा महिला विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् ।
फुटबल राजनीति (एन्फा)मा समेत राम्रो भविष्य रहेका हरी भने आफुलाई प्राविधिक रुपमा विकास गर्दै छन् । गृह जिल्ला झापाका हरीलाई स्वयम प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेका हुन् ।
जन्म दिनमा केक लिएर बालुवाटार पुग्नेदेखि चुनावी प्रचारमा समेत सहभागी बनेर उनले राजनीतिक चरित्र कुशलतापूर्वक निभाएका पनि थिए ।
मानदेव हजारा बोर्ड सदस्यमा सबैका साझा उम्मेदवार थिए । मध्याञ्चल खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षको रुपमा काम गरेका मानदेवलाई खेलकुद महासंघले समेत सिफारिस गरेको थियो ।
पाटी राजनीतिमा मानदेव माधवकुमार नेपाल समूहको रुपमा चिनिन्थे । तर पछिल्लो समय उनी सत्यनारायण मण्डलसंग नजिक छन् । मण्डल, प्रधामन्त्री ओली गुटका मधेशका मुख्य नेता हुन् । त्यसैले पनि उनलाई बोर्ड सदस्य बन्न सहज भएको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।
पाटीभित्रको दलित संगठनमा समेत रहेका हजारालाई खेलकुद मन्त्रीको समेत सद्भाव रह्यो ।
जहाँ सिलवाल, त्यहाँ पुरेन्द्र ।
सिलवाललाई आईपर्ने हरेक समस्याका ओखती हुन्, पुरेन्द्र । अब यो ओखती खेलकुदमा काम लाग्नेछ ।
सिलवाल अहिले राखेपभित्र समस्यामा छन् । खेलकुदमा ‘मनि र मसल्स’ खुबै चल्छ । पैसाले पुगेका सिलवाललाई अहिले ‘मसल्स’ चाहिएको छ । कराँतेका पुरेन्द्रले अब चाहिएको अवस्थामा सिलवाललाई ‘मसल्स’को सप्लाई गर्नेछन् ।
पुरेन्द्रको राखेपको आगमन उनको इच्छा भन्दा सिलवालको आवश्यकताले भएको हो । पुरेन्द्र नभए खेलकुद चलाउन सक्दिन भन्ने सदस्य सचिवको याचनाले पनि यसलाई थप बल प्रदान गर्छ ।
पुरेन्द्रको आगमनले राखेपमा 'मसल्स' भरिएका बोर्ड सदस्यको ‘टोन डाउन’ होला ? थोरै प्रतिक्षा गरौ ।
कराँतेका अन्तराष्ट्रिय खेलाडी लाखे महासंघको केन्द्रिय नेतृत्वमा लामो समयदेखि विराजमान छन् ।
सिलवालका अर्का विश्वास पात्र
राजेश गुरुङ सदस्य सचिव सिलवालले चाहेका अर्का पात्र हुन् । हुन त प्रधानमन्त्री ओलीसंग सिधै पहुँच राख्ने गुरुङलाई ल्याउन सिलवालले जोड गरेका हुन् । मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी गण्डकी प्रदेशका संयोजक पनि हुन्, गुरुङ ।
राजेशको आगमनसंगै राखेपको कार्यकारी समिति आफु अनुकुल बनाउन सकिने सिलवालको विश्वास छ । खेलकुद मात्र नभएर युवा संघका पूर्व नेता समेत रहेका गुरुङलाई आफ्नो विकल्पको रुपमा सिलवालले राख्न सक्नेछन् ।
१३ औं सागको दौरान समेत आफु देशभित्र नभएको अवस्थामा सिलवालले गुरुङलाई निमिक्त कार्यकारी छाड्ने गरेका थिए ।
मोहमद सागिर शेख
नेकपाका मुस्लिम नेता छन्, समिम अन्सारी । उनी अहिले नेपाल मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष छन् । कुनै समय उनी नेपाल कुस्ती संघका थिए, खेलकुद राजनीति गर्थे । विवादका बीच केपी ओलीको जोडबलमा उनी संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष बने ।
अनि संघका आए समिमकै दाजु राज महम्मद मिया अन्सारी । तर नागरिकतामा उनी मोहमद सागिर शेख हुन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकको तीन दिन अघि मात्र समिम बालुवाटार छिरेको नेकपाका एक नेता बताउँछन् । नतिजा शुक्रबार सार्वजनीक गरिएको बोर्ड सदस्यको सूचिमा देखिएको छ ।
नन्दा बस्याललाई बोर्ड सदस्य ‘सरप्राइज नियुक्ति’ हो । धेरैले पत्याएका पनि थिएनन् । उनी भएरै देखाईन् । आफै धेरै विश्वस्त नरहेको उनी निकटस्थलाई सुनाउने गर्थिन ।
राजनीतिमा कहिलेकाँही चिठ्ठा पर्छ, जस्तो नन्दालाई परेको छ । धेरै हेभिवेट नेताहरु खुस्किदा समेत उनी बोर्ड सदस्यमा मनोनित हुन सफल भईन् । तेक्वान्दोकी राष्ट्रिय खेलाडी नन्दा संघको महिला कमिसनको समेत नेतृत्व गरिरहेकी छिन् ।
नेकपाको जन सांस्कृति महासंघ समेत जोडिएकी नन्दा मन्त्रीको रोजाईकी पनि पात्र हुन् ।
राखेपको बोर्ड सदस्यमा एक नाम भने पक्का थियो भने त्यो एकेन्द्र कुँवरको हो । कुँवरको नाममा सबै नेता, कार्यकर्ता ढुक्क थिए । तर स्वयम एकेन्द्र भने ढुक्क थिएनन् ।
एकेन्द्रको कुरा गर्दा कर्ण थापाको नाम छुटाउँदा अपुरो हुन्छ ।
सुदुपश्चिम प्रदेशमा केपी ओलीको लिगेसी कर्ण थापाले बोक्छन् । भिम रावललाई काउन्टर दिन ओली गुटले संरक्षण गरेका नेता हुन्, थापा । अनि सुदुरपश्चिमबाट थापाले खेलकुदमा अघि बढाउन खोजेका नेता हुन्, एकेन्द्र ।
खेलकुद महासंघले समेत सिफारिस गरेका एकेन्द्र, थापाकै जोड बलमा बोर्ड सदस्य बने । खेलकुदमा कर्ण थापाकै कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै मानेको अवस्था छैन । तर थापाको छत्रछायाँमा रहेको एकेन्द्र बोर्ड सदस्यमा दोहरिने धेरैले ठोकुवा गरेका थिए ।
एकेन्द्रको खेलकुद पृष्ठभूमी छैन । तर खेलकुदको प्रवर्दन र सहयोग गर्न आफै अगाडी सर्ने गर्छन् । विद्यार्थी राजनीति एमाले भएपनि उनी चल्तीका मेनपावर ब्यवसायी हुन् ।
लो प्रोफाइलकी खेलकर्मी
प्राय जसो भलिबल प्रतियोगितामा कुर्सीमाथि टेकेर सिटी फुकिरहेको देखिन्छिन्, चन्द्रबदना राई ।
नेपालको पहिलो महिला अन्तराष्ट्रिय रेफ्रीको रुपमा ख्याती कमाएकी राईको भलिबलमा राम्रो नाम छ । उनी कराँतेकी पनि खेलाडी हुन् तर भलिबलमै करियर खोजिन् ।
पूर्व घर भएकाले उनलाई धेरैले प्रदेश नम्बर एकका मुख्य मन्त्री शेरधन राईको नजिक मान्छन् । तर सिलवालकै सद्भावमा उनी बोर्ड सदस्य बनेकी हुन् ।
समावेशी चरित्रको खोजी
नयाँ संविधानले राज्यको सबै निकायमा समावेशीतालाई मुख्य आधार बनाएको छ । आन्दोलनबाट स्थापित समावेशीताको नारालाई नयाँ खेलकुद ऐनमा पनि छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको दफा ३ को (ट) अनुसार मन्त्रीपरिषदबाट मनोनित हुने कस्टरमा थारु समुदायबाट समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सबै प्रदेशमा मिलाउँदै जादा प्रदेश नम्बर ५ बाट थारु समुदायको बोर्ड सदस्यको खोजी सुरु भयो । कम्तीमा तीन महिला समावेश गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश ५ बाटै थारु कोटामा महिला पनि थप्नु पर्ने बाध्यता आईलाग्यो ।
त्यसका लागि दाङ, बाँके र बर्दियामा पात्रहरुको खोजी भयो । सबैको ध्यान बर्दिया बढैयातालकी सुमित्रा चौधरीमा पर्यो । एथ्लेटिक्स खेलको पृष्ठभूमी र प्रदेश मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा सुमित्रालाई थारु समुदायको 'कलस्टर'बाट बोर्ड सदस्यमा मनोनित गरिएको हो ।
यसरी निकै पेचिलो बनेको ९ जना बोर्ड सदस्यको टुङ्गो लाग्यो ।
अन्तिममा खेलकुद मन्त्रीले मनोनित गर्न दुई महिला सदस्य बाँकी थिए ।
सदस्य सचिव र उपाध्यक्षलाई मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्ने बित्तिकै खेलकुद मन्त्रीले आफु अनुकुलका ६ जनालाई बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका थिए । पाटी र प्रधानमन्त्रीसंग सल्लाह नगरि ६ जना नियुक्त गर्दा खेलकुद मन्त्रीलाई दबाब पनि आयो ।
हुन त खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मा ओली गुटबाट मन्त्री बनेका हुन् । तर पार्टीभित्रको अन्तर संघर्षमा उनी ईश्वर पोखरेल समूहका हुन् ।
मन्त्रीपरिषदबाट नियुक्त गरिने कोटामा उनले आफ्नै गुटका नेतालाई खुसी बनाउन सकेनन् । बरु दबाब थेग्न नसकेर निकै लामो समय बोर्ड सदस्यको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा नलगेरै बसे । तर मन्त्रीपरिषदबाट ९ जना मनोनित भएपछि दुई महिला सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार खेलकुद मन्त्रीसंग थियो ।
शुक्रबार मन्त्री परिषद्का ९ जनासंगै थप दुई महिलाको नाम पनि बोर्ड सदस्यको रुपमा मनोनित भएर आए । ती थिए, रेनुका श्रेष्ठ र सुवर्णा श्रेष्ठ ।
खेलकुद संघबाट आउने कोटामा उनले दुई जनालाई बोर्ड सदस्य बनाए । दुवै जना इश्वर पोखरेलको सिफारिस परेका हुन् ।
युवा संघकी कार्यकता रेनुका बडिबिल्डिङ संघमा छिन् । उनी राष्ट्रिय रेफ्री पनि हुन् ।
अर्की सुवर्णा खेलाडी भन्दापनि खेल व्यवस्थापकको रुपमा परिचित छिन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सह–महासचिवसम्म बनेकी उनी पछिल्लो निर्वाचनमा उपाध्यक्षमा पराजित बनेकी थिईन् । त्यसपछि उनी खेलकुदमा देखिएकी छिन् । उनी राखेपमा दर्ता भएको नेपाल रिङ रेस्लिङ्ग संघकी महासचिव हुन् ।
सागको सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्श
आदित्यको सफल प्रेम कहानी
उपाधिको तीन वर्ष, खेलाडीले पाएनन् पुरस्कार
कहाँ छ फुटबल खेलाडी संघ ?
चेन्नईसँग बैंगलोरको हार
सिटीका स्टर्लिङले पिछडिएका युवालाई सहयोग गर्ने
राजस्थानलाई मुम्बईसँग बदला लिने अवसर
युभेन्ट्सलाई भेरोनाको चुनौती
'जोटाले अझै राम्रो गर्न सक्छन्'
बैंगलोरद्वारा चेन्नईलाई १४६ रनको लक्ष्य स्थानः समयः